Iyo nyowani vhezheni yeKali Linux 2018.3 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeKali Linux 2018.3 yave kuwanikwa
Mamwe mazuva apfuura ivo vakomana kubva Kunogumbura Security vakafumura iyo nyowani vhezheni yavo yeKali Linux inoshanda sisitimu iyo inouya nematurusi matsva, gadziriso inogadzirisa uye zvakare system chengetedzo gadziriso.
Yaimbozivikanwa seRedTrack Linux Kali Linux ndeye Debian-yakavakirwa kupinda mukati yekuyedza inoshanda sisitimu, iyo inopa yazvino muLinux uye up-to-date yezvinhu matekinoroji.
Kali Linux iko kugovera kuri chinzvimbo chekuyedza chekuchengetedza, iyo inogona kushandiswa seRarama CD.
Is inowanikwa mu32-bit, 64-bit, ine akasiyana eARM, pamwe nekunaka kunovaka kune akawanda anozivikanwa masoftware mapuratifomu, pakati pazvo atinogona kuratidza Raspberry Pi.
Inosanganisira anopfuura mazana matatu maturu ekuongorora ekupinda, umo FHS, inowirirana neakawanda akasiyana emidziyo isina waya, inouya netsika yeLinux kernel yakabatirwa jekiseni repaketi, inotsigira mitauro yakawanda uye inogadziriswa zvizere.
1 Chii chitsva mukuburitswa kutsva kweKali Linux 2018.3
2 Dhawunirodha Kali Linux 2018.3
Chii chitsva mukuburitswa kutsva kweKali Linux 2018.3
Uku kuburitswa kutsva kweKali Linux 2018.3 inoshanda sisitimu inounza Linux kernel nyowani mushanduro 4.17.0.
Kunyange ivo vasina kuunza shanduko zhinji kubva kune yapfuura 4.16.0 kernel yaive nenhamba yakakura yekuwedzera uye kugadzirisa izvo inosanganisira zvimwe zvitsva zvekuchengetedza zvinopesana neSpecter, kusimudzira manejimendi, uye kutsigirwa kuri nani kweGPU.
Mukati nhau dzinogona kusimbiswa mukuvhurwa uku dzinogona kuwanikwa kuunzwa kweIDB chishandiso chekutsvaga uye kuyedzwa kwekupinda paIOS.
Ichi chishandiso ndechimwe chezvinhu zvinotonhorera zvitsva muKali Linux 2018.3 kuti vabeki kana vavhimi vebug vanogona kushandiswa pakutsvagisa uye kuyedza kupinza paApple's iOS nhare yekushandisa.
Zvimwe zvinhu zvitsva zvinogona kuwanikwa ndeye Kerberoast Kerberos ongororo maturusi uye iyo DathaSploit OSINT fomati yekuita akasiyana maitiro ekuziva mashandiro.
Kune zvakare zvishandiso zvitsva uye kugadzirisa kwematurusi atove aripo mukati meiyo system.
Mukati Iwo matsva maficha anogona kusimbiswa mune ino nyowani kuvhurwa kwesystem ndeaya:
BIDI - BID chishandiso chekurerutsa mamwe mabasa akajairika eiyo iOS application chengetedzo uye kuongorora.
GDB-peda - Python Inoshandisa Kubatsira Kubatsira kweBGF iyo inovandudza GDB kuona: Disassembly inoratidza makodhi, marejista, ruzivo rwekurangarira panguva yekugadzirisa
datasploit - A #OSINT sisitimu yekuita akasiyana masisitimu ekuziva pamakambani, vanhu, manhamba efoni, Bitcoin kero, nezvimwe, data rese mbishi rinowedzerwa uye iyi data inogona kupihwa mafomati akawanda.
kerberoast - Kerberoast inoteedzana yezvishandiso kurwisa Kerberos MS kuita.
Pamusoro pemapakeji matsva aya, zvishandiso zvinoverengeka mukati mezvakachengetedzwa zvakagadziridzwa kusanganisira aircrack-ng, burpsuite, openvas, wifite, uye wpscan.
Dhawunirodha Kali Linux 2018.3
Si unoda kuwana iyi ichangoburwa yeKali Linux 2018.3, munoona iwe unogona kuwana dhawunorodha zvinongedzo zvezvakasiyana ISO mifananidzo nenzizi pane peji reKali download pamwe nehukama kune chaiwo michina uye ARM mifananidzo, iyo yakagadziridzwa zvakare kune iyi nyowani 2018.3 vhezheni.
Kana iwe uchitova neKali Linux kuisirwa uye uchida kuwana iyi nyowani yekuvandudza, hapana chikonzero chekuita nyowani yekumisikidza.
Ingo vhura yako terminal uye unomhanya inotevera mirairo mairi kuti uvandudze kune iyi nyowani vhezheni yesystem.
Nayo ivo vanofanirwa kumirira kuti zvese zvidzoreredzo zvidzorwe uye kuiswa muhurongwa.
Pakupera kwemaitiro aya, zvinokurudzirwa kuti utangezve makomputa ako kuitira kuti shanduko dzese nyowani dzive dzakatakurwa pakutanga uye new system kernel.
Para tarisa kuti iyo vhezheni vhezheni ndiyo yazvino uno, tanga waita shuwa kuti yako Kali package matura ari echokwadi.
deb http://http.kali.org/kali kali-rodando main contrib non-free
Y wobva wangomhanya unotevera kuraira kuti utarise yazvino vhezheni yakaiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo nyowani vhezheni yeKali Linux 2018.3 yave kuwanikwa
Ini ndakaisa kali 2017.1 ine inoenderana kernel 4.9.0 uye ini handigone kuisa iyo nyowani 2018.3.
Pandinomhanya kuti ndigadzirise, inopindura zvinotevera:
apt kugadzirisa && apt -y yakazara-kusimudzira
Mapakeji ese asvika parizvino.
Kuverenga iyo yekuvandudza ... Yaitwa
0 yakagadziridzwa, 0 nyowani ichaiswa, 0 kubvisa, uye 0 haina kuvandudzwa.
Iyo vhezheni iyo muchina unayo sezvandiri kutaura zvinotevera:
grep VERSION / etc / os-kuburitswa
VERSION = »2017.1 ″
VERSION_ID = »2017.1 ″
Linux kali 4.9.0-kali4-686-pae # 1 SMP Debian 4.9.25-1kali1 (2017-05-04) i686 GNU / Linux
Ndiri newbie kunyika yeLinux, asi ngatione kana uchikwanisa kundibatsira,
Kwazisa shamwari Dexter, ndiregererewo, handisi mhinduro yawaitarisira.
Nekuti iwe unoti uri mutsva kune linux nyika, ini ndinongova nevhiki pane izvi.
Kana iwe uchikumbira rubatsiro, uye ini ndichipindura ini ndinokumbira iwe rubatsiro.
hahahahahahaha ndihwo hupenyu.
Ndichafarira mhinduro yako.
Mhoroi munhu wese ... dhawunirodha uye gadza vhezheni 2018.3 uye wedzera iyo repository sezvazviri, asi zvinoitika kana wapedza kugadzirisa zvese zvawaive nazvo Desktop inonyangarika pamwe nekopi yekunamatira mashandiro uye neiri basa rechipiri bhatani reMbeva yangu. .. Handina chandakawana nezve kutadza uku kana kuti handizive kuti ndiko kukundikana here ... pane chaunoziva here nezve izvi ,,, batsira uye pamberi pekutenda
Husiku hwakanaka kuyedza kugadzirisa kali linux 2018.3 inogara ichikanda ini hwindo risingachandibvumidze kuita chero chimwe chinhu chinotaura zvinotevera ...
Yakakura vhezheni 10 isingachashandi inondibvunza kuti ndiwedzere kune postgreql 11 uye postgresq mutengi 11 asi haibvumidze kuita chero chinhu uchishandisa chinongedzo kuiisa inondiudza kuti / var / lib / dpkg / lock-frontend - open haigone kukiyiwa (11: Resource hazviwanike kwenguva pfupi)
Ndingagadzirisa sei dambudziko iri ndapota sezvo Kali isingakutenderi kuisa chero chinhu uye chete chinhu chimwe chete chinobuda, ndingafarire rubatsiro rwako
Iyo nyowani vhezheni yeTeregiramu 1.3.13 inosvika pamwe nekutengesa kunze kwekutaura uye nezvimwe
Iyo itsva vhezheni yeNeptune OS 5.5 yave kuwanikwa